गगन थापा दूरदर्शी नेता : कम्यूनिस्ट अधिनायकवादबारे चुनावअघि गरेको भविष्यवाणी मिल्दै - info4nepal
गगन थापा दूरदर्शी नेता : कम्यूनिस्ट अधिनायकवादबारे चुनावअघि गरेको भविष्यवाणी मिल्दै
काठमाडौं – देशको राजनीति हाँक्ने नेता दूरदर्शी हुनुपर्छ । दूरदर्शी नेता नहुँदा देशले पटक–पटक दुःख पाइरहेको बेला युवा नेता गगन थापाप्रति, युवाले भरोसा गर्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल भइरहेको नेता थापाको एउटा भिडियो क्लीपले उनीप्रति झनै विश्वास बढाउने काम गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा उनले बीबीसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति अहिलेको कम्यूनिस्ट शासनसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ ।
टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्ति सुन्ने सबै नेपाली प्रभावित भएर गगन थापाको प्रशंसा गर्न थालेका छन् । उतिबेलाको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, ‘कम्यूनिस्ट गठबन्धनले के गर्छ भन्दा यो झण्डा गाडेर आजदेखि अधिनायकवाद आयो भनेर भन्दैन । त्यस्तो नचाहिने कुरा हामीले गरेको होइन ।
हामीले वामदेवजीको २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचन गराएको हेरेका छौं, पिटाइ खाएका छौं, माओवादीको पिटाइ पनि खाएर आएका छौं । यो चरम असहिष्णु हुन्छ अरु दलप्रति, यसले प्रजातन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भत्काउँछ, यसले राज्यको प्रहरी अदालत सबैमा सनै–सनै नियन्त्रण गर्दै जान्छ, कम्यूनिस्ट भए बाँच्न पाउने, कम्यूनिस्ट नभए बाँच्न नपाउने (मार्ने भनेको होइन है) अवस्था सिर्जना गर्छ ।’
कम्यूनिस्ट शासन शुरू हुनुअघि नै युवा नेता थापाले दिएको अभिव्यक्ति जस्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कामकारवाही देखिएका छन् । कम्यूनिस्ट नभएबापत केपी शर्मा ओलीको सरकारले विदेश भ्रमणमा जाने क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई विमानस्थलबाटै अपहरण शैलीमा ल्याएर वालुवाटारमा दुव्र्यवहार गरेको घटना केही हप्ताअघि सार्वजनिक भएको थियो ।
राज्य र सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत अन्य व्यक्तिलाई पनि कम्यूनिस्ट सरकारले ‘कम्यूनिस्ट भए बाँच्न पाउने, कम्यूनिस्ट नभए बाँच्न नपाउने’ अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।
कम्यूनिस्ट पार्टीले सरकारमा पुगेपछि जनतासँग गर्ने व्यवहारबारे दूरदर्शी नेता गगन थापाले चुनावअघि नै भविष्यवाणी गरेका थिए । सरकारले कम्यूनिस्ट नभएबापत नै देउवा सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीलाई हटाउने काम समेत गरेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, कम्यूनिस्ट सरकारले सरकारका विभिन्न करार सेवामा रहेर दैनिक गुजारा र जीविकोपार्जन गरिरहेका व्यक्तिलाई समेत हटाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ ।
साउनदेखि नै करार नियुक्ति नवीकरण नगर्ने भनिएपनि करार कर्मचारी र कांग्रेसको दबाबका कारण सरकार केही महिना म्याद थप्न बाध्य भएको छ । तर, सरकारले लामो समय सेवा गरेका करारका कर्मचारीलाई हेप्न अझै छाडेको छैन ।
कम्यूनिस्ट नभएकै कारण कम्यूनिस्ट सरकारले अदालत र प्रहरी संगठनमा रहेका लोकतान्त्रिक मान्यता राख्ने पदाधिकारीलाई पेल्न शुरू गरिसकेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई कम्यूनिस्टको बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र सरकारले प्रधानन्यायाधीश हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको छ ।
प्रजातन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका संस्थामा कम्यूनिस्ट सरकारले ‘सनै–सनै नियन्त्रण’ गर्दै गइरहेको छ । यसले सरकार निरंकुश र अधिनायकवादी बाटोमा गइरहेको प्रष्ट हुन्छ ।
कम्यूनिस्ट सरकारका कदमबाट सजग हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सशस्त्र आन्दोलन चलाएको छ । आन्दोलन अन्तर्गत नै मंगलबार देशभर जिल्ला सदरमुकाममा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनमा व्यापक जनसहभागिता रहेको थियो ।
युवा नेता गगन थापाले पार्टीभित्र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै सरकार विरोधी आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । गगन थापाकै दूरदर्शिताका कारण सरकारले अधिनायकवादी कदमबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ ।
डा. गोविन्द केसी अनशन प्रकरणमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कांग्रेसकै प्रस्ताव अनुसार अगाडि बढाउन सहमति जनाएको छ । सोही अनुरुप प्रतिनिधिसभा सांसद समेत रहेका गगन थापाले संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन् ।
युवा नेता गगन थापाको सशक्त भूमिका देखेर तर्सिएका कम्यूनिस्ट शासकले विभिन्न बखेडा झिक्दै उनलाई बद्नाम गर्न खोजिरहेका छन् ।
तर, गगन थापाको इमान्दारिता, स्वच्छता छवि, पारदर्शिता र स्पष्ट वक्ताको छविले कम्यूनिस्ट शासक र कार्यकर्तालाई लगातार असफलता मिलिरहेको छ । कम्यूनिस्टको मनपरी शासनबाट देशलाई गगन थापाले बचाउन सक्ने जनताले आशा गरेका छन् ।
बलत्कारिलाइ मृत्युदण्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न?? कमेन्ट गर्नुस
भाइटीकाको शुभ साइत सार्वजनिक, शेयर गरौ अरुलाई पनि जानकारी दिउ
ranjan November 4, 2018
इमानको राजनीति गर्छु भन्दै राजनीतिमा होमिएका रबिन्द्र मिश्रले किने १६ करोडको घर
ranjan October 25, 2018
मलेसियाबाट आयो दुखद खबर: नेपाल आउन मात्र १८ दिन बाँकी हुदा एक नेपालीको मृत्यु.पुरा पढ्नुहोस
ranjan June 14, 2018
जुम्लामा प्रहरिले विद्यार्थी लाई ताकेर हानेको गोलि लागेर ‌प्रहरी को नै मृत्यु
ranjan July 19, 2018
दुखद खबर :नेपाली कांग्रेसका होनहार नेता प्रकाशबाबु तिवारीको निधन
ranjan November 11, 2018